Wubetumi Aboa wɔ W’asafo Mu? | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Bislama Cambodian Chitonga Cibemba Cinyanja Dangme Drehu Efik English Ewe French Ga Garifuna Greenlandic Haitian Creole Hausa Hmong (White) Igbo Isoko Italian Kazakh Kikaonde Kikongo Kimbundu Kongo Kwangali Kwanyama Laotian Lingala Lunda Luvale Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Ngabere Nyaneka Nzema Otetela Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Sepedi Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Silozi Spanish Swahili (Congo) Swati Tahitian Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Twi Umbundu Urhobo Venda Wallisian Wayuunaiki Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Bɔ mmɔden hu mmoa a yɛn nuanom hia, kyekye wɔn werɛ, na fa Bible mu asɛm bi hyɛ wɔn nkuran
ANSA na Yesu rekɔ soro no, ɔka kyerɛɛ n’asuafo sɛ: ‘Mobɛyɛ m’adansefo de akɔ asase ano nohoa.’ (Asomafo Nnwuma 1:8) Ná ɛbɛyɛ dɛn na asuafo no atumi aka asɛm no wɔ asase so baabiara?
Martin Goodman kyerɛ ade wɔ Oxford Suapɔn mu. Ɔkae sɛ, “Saa adwuma yi maa Kristofo daa nsow koraa wɔ nyamesom akuw ne Yudafo a na wɔwɔ tete Roma ahemman mu no ho.” Yesu kyinkyin kaa asɛm no wɔ mmeae pii. Ná ɛsɛ sɛ nokware Kristofo suasua nea Yesu yɛe no na wɔka “Onyankopɔn ahenni ho asɛmpa” no wɔ baabiara. Ná ɛsɛ sɛ wɔhwehwɛ nkurɔfo a wɔrepɛ nokware no ahu. (Luka 4:43) Ɛno nti na tete Kristofo bere so no, na “asomafo” wɔ hɔ no. Asɛmfua asomafo no kyerɛ nnipa a wɔasoma wɔn sɛ wɔnkɔyɛ biribi. (Marko 3:14) Yesu ka kyerɛɛ n’akyidifo sɛ: “Monkɔ nkɔyɛ aman nyinaa m’asuafo.”—Mateo 28:18-20.
Yesu asomafo 12 no nni asase so bio, nanso Yehowa asomfo pii suasua nea asomafo no yɛe wɔ wɔn asɛnka adwuma no mu. Sɛ wɔfrɛ wɔn sɛ wɔnkɔka asɛm no wɔ baabi a wohia mmoa kɛse a, wɔka sɛ: “Mini, soma me.” (Yesaia 6:8) Ebinom atu kɔ aman a ɛwɔ akyirikyiri so; wɔn mu bi ne anuanom mpempem a wɔawie Gilead Sukuu no. Ebi nso atu kɔ baabi wɔ wɔn ankasa man mu. Anuanom pii nso asua kasa foforo sɛ wɔde bɛboa asafo bi anaa kuw bi. Ɛnyɛ bere nyinaa na na ɛyɛ mmerɛw ma saa anuanom yi, nanso na wɔayɛ krado sɛ wɔde nneɛma bɛbɔ afɔre de akyerɛ sɛ wɔdɔ Yehowa ne nnipa. Enti wɔtotoo nneɛma yiye, na wɔde wɔn bere, wɔn ahoɔden, ne wɔn sika kɔboa kaa asɛm no wɔ baabi a wohia mmoa. (Luka 14:28-30) Adwuma a anuanom mmarima ne mmea reyɛ yi reboa paa.
Ɛnyɛ yɛn nyinaa na yebetumi atu akɔboa wɔ baabi a mmoa ho hia anaa yebetumi asua kasa foforo. Nanso yɛn nyinaa betumi ayɛ yɛn ade te sɛ asɛmpatrɛwfo wɔ yɛn ara asafo mu.
YƐ ƆSƐMPATRƐWFO WƆ WO ARA W’ASAFO MU
Asomafo no bere so no, na Kristofo dodow no ara tete wɔn kurom, na wɔnyɛ asɛmpatrɛwfo, nanso wɔde nsi ne ahokeka yɛɛ asɛnka adwuma no. Paulo ka kyerɛɛ Timoteo sɛ: “Yɛ ɔsɛmpakafo adwuma, yɛ wo som adwuma no pɛpɛɛpɛ.” (2 Timoteo 4:5) Ná saa asɛm yi fa tete Kristofo no ho, na ɛnnɛ nso, ɛfa yɛn ho. Ɛsɛ sɛ Kristofo nyinaa tie ahyɛde a ɛne sɛ yɛnka Ahenni ho asɛmpa no na yɛmma afoforo mmɛyɛ asuafo. Yɛn ara asafo mu mpo, yebetumi ayɛ yɛn ho asɛmpatrɛwfo wɔ akwan pii so.
Nhwɛso bi ni. Sɛ asɛmpatrɛwfo tu kɔ ɔman foforo so a, wokohyia asetena foforo koraa, enti ɛsɛ sɛ wohu ɔkwan a wɔbɛfa so atena hɔ. Sɛ mpo yɛrentumi nkɔboa wɔ baabi a mmoa ho hia a, yebetumi ahwehwɛ akwan foforo a yɛbɛfa so aka asɛm no akyerɛ nkurɔfo anaa? Yɛnhwɛ nhwɛso bi. Afe 1940 no, wɔhyɛɛ anuanom nkuran sɛ nnawɔtwe biara wonyi da koro mfa nni adanse abɔnten so. Eyi ne bere a edi kan a wɔde biribi a ɛte saa too gua. Yemmisa sɛ, woasɔ abɔnten so adansedi ahwɛ pɛn? Wode trɔk a yɛhyehyɛ nhoma wɔ so adi adanse da? Asɛm no ne sɛ, W’ani gye ho sɛ wobɛsɔ akwan foforo a yɛfa so ka asɛmpa no ahwɛ anaa?
Hyɛ afoforo nkuran ma ‘wɔnyɛ asɛmpaka adwuma’
Sɛ wowɔ asɛnka adwuma no ho adwempa a, wode nsi ne ahokeka na ɛbɛyɛ. Mpɛn pii no, anuanom a wotu kɔ baabi a wohia mmoa anaa wosua kasa foforo no yɛ adawurubɔfo a wɔfata paa a wobetumi aboa asafo no yiye. Anuanom a wɔte saa no di anim wɔ asɛnka adwuma no mu. Sɛ asɛmpatrɛwfo nso kɔ baabi a, wɔtaa di nneɛma anim wɔ asafo no mu kosi sɛ wobenya anuanom a wɔfata ma wɔayɛ saa. Sɛ woyɛ onua a wabɔ asu a, ‘wopɛ’ sɛ wuyi wo yam som wo nuanom wɔ w’asafo mu sɛ asafo mu ɔsomfo anaa asafo mu panyin?—1 Timoteo 3:1.
‘HYƐ AFOFORO DEN’
Yɛ nneɛma bi fa boa wɔn
Yɛn nso, yebetumi aboa yɛn asafo wɔ akwan foforo so. Sɛ yɛyɛ mmofra anaa mpanyin oo, anuanom mmarima anaa mmea oo, yɛn nyinaa betumi ahyɛ yɛn nuanom Kristofo a wohia mmoa den.—Kolosefo 4:11.
Sɛ yɛpɛ sɛ yɛboa yɛn nuanom mmarima ne mmea a, ehia sɛ yehu wɔn yiye. Bible hyɛ yɛn nkuran sɛ yehyiam a, “yensusuw yɛn ho yɛn ho ho,” anaa yennwen yɛn nuanom ahiade ho. (Hebrifo 10:24) Eyi nkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛfeefee afoforo nsɛm mu hu wɔn asetena mu biribiara. Ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden te yɛn nuanom ase na yehu mmoa a yɛde bɛma wɔn. Ebia ebehia sɛ yɛboa wɔn wɔ nneɛma bi mu, yɛkyekye wɔn werɛ, anaa yɛde Bible mu asɛm bi hyɛ wɔn nkuran. Ɛyɛ nokware sɛ ɛtɔ bere bi a asafo mu mpanyimfo ne asomfo nko ara na wobetumi aboa wɔn. (Galatifo 6:1) Nanso yɛn nyinaa betumi aboa anuanom a wɔn mfe akɔ anim, anaa abusua bi a emufo nyinaa rehyia ɔhaw.
Kyekye wɔn a wɔrehyia ɔhaw wɔ asetena mu werɛ
Salvatore nyaa mmoa a ɛte saa. Ɔbɔɔ ka kɛse bi, enti na ɛsɛ sɛ ɔtɔn n’adwuma, ne fie, ne n’abusua agyapade pii. Ná odwen sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛhwɛ n’abusua ho paa. Abusua bi a wɔwɔ asafo no mu de wɔn ani too fam hui sɛ wohia mmoa. Wɔmaa Salvatore sika kakra, na wɔboaa ɔne ne yere ma wonyaa adwuma nso yɛe. Ná abusua yi taa kɔsra Salvatore ne n’abusua anwummere anwummere ne wɔn bɔ nkɔmmɔ hyɛ wɔn nkuran. Eyi ma wɔbɛyɛɛ nnamfo paa. Seesei sɛ mmusua mmienu yi kae bere a wonya maa wɔn ho bere a wɔkɔɔ ahokyere mu no a, wɔn ani gye paa.
Nokware Kristofo ntwentwɛn wɔn nan ase sɛ wɔbɛka wɔn gyidi ho asɛm akyerɛ afoforo. Ɛsɛ sɛ yesuasua Yesu, na yɛma obiara hu nneɛma pa a Onyankopɔn ahyɛ ho bɔ no. Sɛ yebetumi atu akɔ baabi oo, sɛ yɛrentumi oo, momma yɛn nyinaa nyɛ nea yebetumi biara mfa mmoa afoforo wɔ yɛn ara asafo mu. (Galatifo 6:10) Sɛ yɛboa afoforo a, yɛn ani begye, na ‘yɛbɛkɔ so asow aba wɔ adwuma pa biara mu.’—Kolosefo 1:10; Asomafo Nnwuma 20:35.